Su'aalaha - Shenzhen anytec Technology Co., Ltd.
Waxaan nahay soo saare saacad caqli gal ah, waxaanan siineynaa macaamiisheena OEM iyo adeegga ODM.
Waxyaabaha caadiga ah, MOQ-du waa 5 qaybood oo loogu talagalay macaamiisha tijaabineysa suuqooda, iyo u qaabeynta walxaha, MOQ-keena waa 1000pcs. (Haddii app ka habboon yahay 10k, sdk 5k).
Ma heli karaa muunad bilaash ah?
Shaybaarka bilaashka ah, waan kuu codsan karnaa ka dib markaad bixiso oo aad tijaabiso shaybaarkayaga, haddii aad dalbato alaabooyin tiro badan, waxaan dib ugu soo celin doonnaa khidmadda saamigaaga ee bixinta dalabka tirada badan.
Waa maxay muddada lacagtaada?
Amarada alibaba, waxaad kubixin laheyd dammaanada ganacsiga alibaba khadka tooska ah, haduu offline yahay, T / T waa la aqbali karaa, 30% dhigaal ah iyo 70% dheelitir ka hor rarka.
Waa maxay waqtiga dhalmadaadu?
Haddii muunad aan hayno keydka waqtiga la keenayo ay tahay 1-3 maalmood, iyo amarro yaryar oo ka hooseeya 500pcs, waa 3-7 maalmood, iyo amarrada wax soo saar ballaaran ee ku saabsan 15 illaa 20 maalmood, waxay kuxirantahay tiradaada dalabkaaga.